Netflix waxay garaaci doontaa wadar ahaan 190 dal sannadkan. | Wararka IPhone
Netflix wuu koraa, wuu koraa oo ma joojiyo koritaanka, sida kubbadda barafka oo ku rogmaysa kuna rogrogaysa kartoonnada. Maanta Netflix kuma dhawaaqin oo keliya 94 ku darista ee ay ku sameysay Spain qaab taxane ah, filimo iyo dokumentiyo, laakiin sidoo kale waxay ka digeysaa in hadda aan laga heli karin wax kale dalal aad u tiro badan, taasoo bixin doonta wadar aan ka badnayn kana yaraan 190 waddan. Ogeysiiskan waxaa soo saaray afhayeenka Netflix inta lagu gudajiray carwada teknolojiyada muhiimka ah ee CES 2016, halkaas oo balaadhinta Hindiya la filayay oo kaliya in lagu dhawaaqo.
Bilowga Hindiya si xaqiiqo ah ayaa loo xaqiijiyay, laakiin Ruushka, Imaaraadka Carabta iyo Indooniisiya ayaa sidoo kale ku soo biiray. Nasiib darrose, Shiinaha iyo cilladaha ka jira heerka xuquuqda lahaanshaha shakhsiyadeed waxay weli dhibaato ku tahay noocan tiknoolajiyadda iyo qiiqa, runti waa cabsi aad u weyn in la soo galo waddan aan loo ixtiraamin hantida aqooneed ugu yaraan oo macnaheedu noqon karo khasaare weyn lacag. Si kastaba ha noqotee, shirkadda weyn ee Aasiya gebi ahaanba ma lumin, Netflix waxay la shaqeyneysaa Alibaba si ay ugu dambeyntii u keento noocan fiisaha qulqulka sharciga ah dadka Shiinaha. Shaki la'aan, ururkan oo leh shirkad weyn oo qoto dheer halkaas ayaa ku siin kara natiijooyin aad u wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa in tani ay xoogaa qaboojisay sababtuna tahay ujeedka Alibaba inuu bilaabo adeegiisa baahinta.
Aniga oo tixgelinayna taas Dalalka 190 waa ku dhowaad dhammaan kuwa ay aqoonsatay UN-ka, waxaan ku soo koobaynaa liiskaas yar waxaan ka helaynaa Crimea, Waqooyiga Kuuriya (sababo muuqda) iyo Suuriya, dhammaantoodna waxaa ugu wacan xaddidaadaha ay soo rogtay dowladda Mareykanka. Si aad u hubiso haddii waddankaaga laga heli karo liistada weyn ee waddamada leh Netflix, waxaad geli kartaa websaydhka caawimaadda ee Netflix oo fiirisaa mahadsanid este isku xirka
Barnaamijka Netflix ee loogu talagalay macruufka
Tani runti waa barnaamij weyn. Nasiib darrose ma aanan helin waxyaabaha ugu macquulsan ee ugu macquulsan, maaddaama Netflix ay Spain ka bilaabatay xilli dambe, sidaas waa inuu la dagaallamaa tartame sida Yomvi oo ka socda Movistar + Midda ay adkaan doonto in la dumiyo, ayaa ah in Movistar + oo Isbaanishka ah kaliya uusan xukumin taxanaha, laakiin sidoo kale shineemo hore iyo dhacdooyinka isboorti ee adduunka ugu muhiimsan. Haddii aan ku darno xaqiiqda ah in Movistar ay tahay shirkad si adag ugu xididaysan dalkeenna, waxaan u aragnaa isku-darka ugu xun ee suurtogalka ah ee Netflix. Si kastaba ha noqotee, taasi kama hor istaageyso inay ku korto heer arxan darro ah, waxaan ogaanay in Netflix uu kordhay shantii maalmood ee la soo dhaafay buugga codsigiisa ee taxanaha 94, filim iyo dokumentiyo illaa iyo hadda aaney jirin.
Codsiga Netflix waa isku dhufasho, marka lagu daro kuwa dhabta ah, oo leh nidaam isku dhafan oo isku dhafan oo ku saabsan iOS, PC iyo Android, waan joojin karnaa daawashada filim ama taxane ah hal meel si toos ah loogu aado kuwa kale. Intaas waxaa sii dheer, nidaam xisaabeedkeedu wuxuu noo oggolaanayaa inaan la socono waxyaabahayaga oo aan waxba ka maqnayn. Marka laga hadlayo qaddarka, in kasta oo khilaafaad badani ka dhasheen xaqiiqda ah in Movistar, oo sidoo kale ah hawl wadeen isku xira ADSL, uu si aad ah u xaddiday helitaanka adeeggan.
Waxyaabaha sida sahlanaanta ay Netflix uga shaqeyso isku xirnaanta liidata, Sidoo kale waxyaabaha ku jira 1080p ee aan ku raaxeysan karno, aad ayaan ugu talinayaa. Qiimaha, waxaan kaheleynaa fursadaha soo socda:
1 Qalabka + Tayada SD: 7,99€ bishii
2 Qalabka + Tayada HD: 9,99€ bishii
6 Qalabka + Tayada 4K: 11,99€ bishii
Si kastaba ha noqotee, Netflix waxay na siisaa fursado badan, sida isdhexgalka buuxa ee Vodafone, inta badan xirmooyinkooda waxay na siinayaan lix bilood oo adeeg ah oo bilaash ah. Dhinaca kale, shirkadda lafteeda ayaa noo oggolaaneysa inaan ugu raaxeysano adeeggeeda gebi ahaanba bilaash. Waxaan ka heli karnaa taxane sida Narcos o Daredevil si gaar ah loogu raaxeysto, kuwaas oo aad u fiican. Waxaan kuu dhaafnay isku xirka barnaamijka Netflix ee loogu talagalay IOS, si aad u tijaabiso oo aad naftaada ugu go'aansato bishaada bilaashka ah.
Noo sheeg haddii aad jeceshahay Netflix ama aad doorbideyso waxyaabaha kale ee soo socda ee booqanaya adeegyada booqashada. Shaki la'aan, kaliya maahan mid ka mid ah kuwa bixiya buugga ugu fiican, laakiin sidoo kale waxay leedahay qiime fiican, laakiin Isbaanishka waxay leedahay dhul aad iyo aad u adag oo lagu dhex galo inta badan dadka isticmaala.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » Waqtiyada firaaqada » Netflix wuxuu gaari doonaa wadar ahaan 190 dal, wuxuu ka faa'iideysan doonaa App-kiisa 'iOS'
Netflix shaki la'aan iyo appletv4-ga waa layaab yaab leh, aad u dhakhso badan oo tayo leh. PS Haddii aad haysatid Vodafone TV, ha ku daawanin shaashadda tive decoder lafteeda, barnaamijku waa mid cabsi badan oo aad u gaabis ah in uu quusto, isticmaal smartv si aad u daawato appletv ama telefishanka telefishinkiisa u gaarka ah, iwm. Laakiin dabcan marna waa wax laga naxo.
Waa tigidh iibka netflix ka badan, waan la yaabanahay?
Wax ugu jawaab
Isbaanishka ma taageertaa 6 isticmaaleyaal isku mar ah?
Osiris Armas Madiina dijo
Halkan ama meelna, qoraagu MA diiwaangelin Waxba oo wuxuu qoray balaayo.
Apple wuxuu bilaabi doonaa suunka madow ee loo yaqaan 'Milanese Loop' ee loogu talagalay Apple Watch si dhakhso leh
Haddii aad leedahay Apple Watch, waxaad dooneysaa qalabkan: Amber (CES 2016)